သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် HARD DISK ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို - HARD DISK ကို - 2019
တစ်ဦးကို PC ပေါ်မှာနှင့်တစ်ဦး Laptop ကိုအပေါ်တစ်ဦး hard drive ကိုအစားထိုး
အဆိုပါ hard drive ကိုခေတ်မမီတော့ဖြစ်တဲ့အခါ, သူကဆိုးဆိုးရွားရွားလုပ်ကိုင်ဖို့စတင်ခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်လက်ရှိငွေပမာဏကိုလုံလောက်အောင်မဖြစ်, အသုံးပြုသူအသစ်တခု HDD ဒါမှမဟုတ် SSD ကိုကပြောင်းလဲပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ အသစ်အဖို့အဟောင်း drive ကိုအစားထိုး - ပင်အတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ရိုးရှင်းသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသမားရိုးကျ desktop ကွန်ပျူတာနှင့်လက်တော့ထဲမှာလုပ်ဖို့အညီအမျှလွယ်ကူပါတယ်။
အဆိုပါ hard disk ကိုအစားထိုးဘို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ
သငျသညျသစ်ကိုရန်သင့်ဟောင်း hard drive ကိုအစားထိုးဆုံးဖြတ်ပါကအလွတ် disc ကို install လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, နှင့် operating system ကိုမှ Re-set နှင့်အခြားဖိုင်များကို download လုပ်ပါရန်။ ဒါဟာအခြား HDD သို့မဟုတ် SSD ကိုဖို့ OS ကိုလွှဲပြောင်းရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဘယ်လို SSD ကိုမှစနစ်လွှဲပြောင်းရန်
ဘယ်လို HDD မှစနစ်လွှဲပြောင်းရန်
ဒါ့အပြင်သင်တစ်ခုလုံးကို disk ကို clone နိုင်ပါတယ်။
ပုံတူပွားခြင်း SSD ကို
Next ကိုကျနော်တို့ကစနစ်ယူနစ်နှင့်ထို့နောက်လက်ပ်တော့တစ် disk ကိုအစားထိုးရန်ဖို့ဘယ်လိုဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။
စနစ်ယူနစ်အတွက် hard drive ကိုအစားထိုး
အသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းဖို့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုလုံးကို disk ကို-ပြောင်းကုန်ပြီ pre စေရန်, သငျသညျအဟောင်း hard drive ကိုရဖို့ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ပြုပါရန်လုံလောက်, ခါတိုင်းလိုအဖြစ် PC ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး OS ကို၏အပြောင်းအရွှေ့လုပ်ဆောင်ပါ (Motherboard ကနှင့်အာဏာထောက်ပံ့ရေး disk ကိုဆက်သွယ်ဘို့ 2-4 ဆိပ်ကမ်းများရှိသည်) အဖြစ်ကောင်းစွာပထမဦးဆုံးနဲ့ချိတ်ဆက်အဖြစ်ဒုတိယ HDD ကိုချိတ်ဆက်ရန် 1-3 လုပ်ပါ။ သင်ဤဆောင်းပါးရဲ့အစမှာရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်လွှဲပြောင်းဘို့လမ်းညွှန်ချက်များမှ links ။
ကွန်ပျူတာအဆက်ဖြတ်လိုက်ပါနဲ့အဖုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ အများစုမှာစနစ်ကယူနစ် screw နှစ်ခုနှင့်အတူဆွဲထားကြ၏သောအခြမ်းအဖုံး, ရှိသည်။ ဒါဟာသူတို့ကိုလျှော့ပေးရေးနှင့်ဖုံးဘေးတိုက်လျှောဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
အဆိုပါ HDD ကို install ရှိရာသေတ္တာကိုရှာပါ။
တစ်ခုချင်းစီကို hard drive ကိုသားဘုတ်နဲ့ပါဝါထောက်ပံ့ရေးချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ hard drive ကိုအနေဖြင့်တိုးချဲ့ပုဝါယာကြိုးရှာပါနဲ့သူတို့အချိတ်ဆက်သော device ကိုမှဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
အများစုမှာဖွယ်ရှိ, သင့် HDD box ကိုမှ screw နှစ်ခုနှင့်အတူဆွဲထားကြ၏ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက drive ကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်ပျက်စီးစေခြင်းအလိုငှါလှုပ်အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တစ်ဦးစီလျှော့ပေးရေးနှင့် disc ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
ယခုငါကြီးအဟောင်းကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်သစ်ကို drive ကို install လုပ်ပါ။ အသစ်က drives တွေကိုထဲကအတော်များများလည်းလွယ်ကူပါတယ်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အထူး pads (စဘောင်သံလမ်းအဖြစ်လူသိများ), တပ်ဆင်ထားကြသည်။
အဆိုပါပြားဖို့ screw နှစ်ခုစွဲစေ, သူတို့ကယခင် HDD နဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်အဖြစ် Motherboard ကများနှင့်အတူတူပင်လမ်းမှာရှိတဲ့ power supply ရန်ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်ပါ။
အဖုံးပိတ်ပြီးမရှိပဲ, PC မှာဖွင့်နှင့်, BIOS drive ကိုရှုမြင်ပါလျှင်စစ်ဆေးကြိုးစားပါ။ လိုအပ်ခဲ့လျှင် (ထို operating system ကိုပလ္လင် installed လျှင်), မူလတန်း Boot တက်အတိုင်းဤ drive ကို BIOS ကို setting တွင်သတ်မှတ်ထားသည်။
ဟောငျး BIOS ကို: အဆင့်မြင့် BIOS ကို> ပထမဦးစွာ Boot ကိုစက်ပစ္စည်း Features
နယူး BIOS ကို: boot> ပထမဦးစွာ Boot ကိုဦးစားပေး
ဒေါင်းလုဒ်အောင်မြင်စွာသွားပြီဆိုရင်အဖုံးပိတ်လိုက်ပြီး screw နှစ်ခုနှင့်အတူက secure နိုင်ပါတယ်။
လက်ပ်တော့အတွက် hard drive ကိုအစားထိုး
လက်ပ်တော့တစ်စက္ကန့် hard drive ကိုချိတ်ဆက်ပါ (Pre-ကိုယ်ပွားဘို့ဥပမာတစ်ခု OS ကိုသို့မဟုတ် disk တခုလုံးအတွက်) ပြဿနာပါပဲ။ ဤသည်ကိုအသုံးပြုခြင်း SATA-to-USB အ adapter နှင့်ပြင်ပ plug ကိုအဖြစ် hard drive ကိုမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ လွှဲပြောင်းမှုစနစ်ပြီးနောက်အသစ်ကတဦးတည်းမှအဟောင်းကို drive ကနေအစားထိုးနိုင်ပါသည်။
ရှင်းလင်းချက်: သငျသညျလုံးဝကိရိယာမှအောက်ခြေအဖုံးကိုဖယ်ရှားပေးရန်လိုအပ်ပါမည် disc ကိုအစားထိုးလက်ပ်တော့။ သင့်ရဲ့ Laptop ကိုမော်ဒယ်များ၏ဆန်းစစ်ဘို့တိကျတဲ့ညွှန်ကြားချက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သေးငယ်တဲ့ဝက်အူလှည့ Pick, အဖုံးရရှိထားသူသောသေးငယ်တဲ့ဝက်အူဖို့သင့်လျော်သော။
အဆိုပါ hard disk ကိုသီးခြားအခန်းတွင်တည်ရှိသည်နိုင်ပါတယ်ကတည်းကသို့သော်အလွန်မကြာခဏအဖုံးကိုဖယ်ရှားရန်မလိုအပ်လျက်ရှိ၏။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, screw နှစ်ခုရှိရာ HDD အမှတ်မှာသာဖယ်ရှားခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
laptop ကိုနှိမ့်ချပါဝါ, ဘက်ထရီကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အောက်ခြေအဖုံး၏ပတ်လည်အတိုင်းအတာတစ်ဝှမ်းသို့မဟုတ်ရှိရာ drive ကိုသီးခြားနယ်မြေကနေ screw နှစ်ခုလျှော့ပေးရေး။
ညင်ညင်သာသာအဖုံးဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အထူးဝက်အူလှည့ရုတ်သိမ်းပေးရန်။ ဒါဟာသင်လွဲချော်ကြောင့်ကြိုးတွေသို့မဟုတ် screw နှစ်ခုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ drive ကို screw နှစ်ခုနှင့်အတူဆွဲထားကြ၏ရပါမည်, ဒါကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းတုန်လှုပ်ခြင်းမရှိပါ။ သူတို့ကိုဝက်အူဖြုတ်။ အဆိုပါယန္တရားရှိလျှင်သို့သော်, HDD လိုက်. ရဖို့လိုအပ်တယ်, အထူးဘောင်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အဘယ်သူမျှမဘောင်လည်းမရှိလျှင် hard drive ကို mount ကိုသင်ဆွဲ device ကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သောအဆိုပါတိပ်ခွေကိုမြင်ရဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ က HDD မှစင်ပြိုင်နှင့်သင့်အဆက်အသွယ်ကနေ disconnect Pull ။ ဒါဟာသင်တိပ်အပြိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆွဲထုတ်ကြောင်းပေး, ပြဿနာများကိုမပါဘဲသွားသင့်ပါတယ်။ သင်ကတက်ဆွဲထုတ်သို့မဟုတ် left နှင့်ညာဘက်ဆိုပါက drive ကိုဒါမှမဟုတ် Laptop ကိုပေါ်တံသင်ကိုပျက်စီးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: အဆိုပါလက်တော့၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဒြပ်စင်၏တည်နေရာပေါ် မူတည်. drive ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ဥပမာတခြားအရာတစ်ခုခု, USB-port များပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သူတို့မှာလည်းဝက်အူဖြုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်ဦးအချည်းနှီးသော box ထဲမှာထည့်သွင်းသို့မဟုတ်အသစ် HDD ဘောင်။
အဆိုပါ screw နှစ်ခုတင်းကျပ်ရန်သေချာစေပါ။
လိုအပ်သောလျှင်, disc ကိုအစားထိုးတာဖြစ်ပါတယ်တားဆီးသောဒြပ်စင် reinstall ။
အဖုံးပိတ်ပြီးမရှိပဲ, မှတ်စုစာအုပ်ကိုစတငျဖို့ကြိုးစားပါ။ ဒေါင်းလုဒ်မျှပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင်အဖုံးကိုပိတ်လိုက်ခြင်းနှင့် screw နှစ်ခုတင်းကျပ်နိုင်ပါတယ်။ , စင်ကြယ်သော drive ကိုသတ်မှတ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, BIOS သို့သွားနှင့်ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေရဲ့စာရင်းထဲတွင်စေရန်, အသစ်စက်စက် install လုပ်လိုက်တဲ့မော်ဒယ်စစ်ဆေးပါ။ BIOS ကို screenshots များမှန်ကန်စွာတစ်ခုသို့ဆက်စပ် drive ကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်ဘယ်လိုကနေ boot တက် enable လုပ်ဖို့, သင်အထက်တွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဖေါ်ပြခြင်း။
ယခုသင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာအတွင်း hard drive ကိုအစားထိုးဘယ်လိုလွယ်ကူသောငါသိ၏။ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုအတွက်သတိထားလေ့ကျင့်ခန်းကလောက်နှင့်မှန်ကန်သောအစားထိုး၏လမ်းညွှန်မှုလိုက်နာပါ။ သင် drive ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အစားမထိုးနိုင်ရင်တောင်စိတ်ဆိုးဖြစ်, သင်ဖျော်ဖြေသောခြေလှမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ကြိုးစားပါဘူး။ connected, တစ်ဦးအလွတ် disc ကိုတပြိုင်နက်, သင်က Windows (သို့မဟုတ်အခြား OS ကို) ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တစ်ဦးကို PC / Laptop ကိုအသုံးပြုရန်သင်၏ operating system ကိုအတူ bootable flash drive ကိုမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ site တွင်သင်သည် Windows7ကို Windows 8, Windows က 10, Ubuntu ကိုအတူ bootable USB flash drive ကိုဖန်တီးရန်မည်သို့မည်ပုံအပေါ်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။